Uhlolo lwe-Huawei P10 Plus kunye neempawu kunye nezimvo | I-Androidsis
I-Huawei P10 Plus, uhlalutyo kunye noluvo
Huawei Ukubheja komelele kuhlobo lokugqibela lweNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ebonisa izixhobo ezimbini, i-P10 kunye ne-P10 Plus, etsala onke amehlo.
Sele sihlalutye ngokucokisekileyo i-Huawei P10, ngoku lithuba lokuguqulelwa okunamavithamini ngakumbi. Ngaphandle kokuqhubeka, ndikushiya ne Ukuphononongwa ngeSpanish kweHuawei P10 Plus.
2 Iimpawu zobugcisa zeHuawei P10 Plus
3 Umfundi onamandla weminwe onemimangaliso emikhulu
4 Isibonisi se-2K sokuthambisa amagxa ngeyona inkulu
5 Isithethi esimangalisayo
6 Ukuzimela ngokuchanekileyo, ukutshaja ngokukhawuleza okukhulu
7 I-EMUI 5.1 ithatha inyathelo eliya phambili ngokokusebenza
8 Enye yeekhamera ezintle kwimarike
9 Igalari yeefoto ezithathwe ngeHuawei P10 Plus
10 Izigqibo zokugqibela
11 Uluvo lomhleli
Njengakwinguqulelo engaphezulu kwesiphelo, IHuawei P10 Plus inoyilo olufana kakhulu nolwe-P9, nangona kuthotho lweenkcukacha ezenza umahluko.
Eyona ibalulekileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, yile Ukutshintsha indawo yokufunda ngomnwe, eyenzekayo ukuba imile eluxande kunye namacala asondeleyo kwaye ibekwe ngaphambili. Isizathu? Ifowuni ke ilunge ngakumbi ngokubhekisele kubunzima. Yeyiphi imeko efanelekileyo? Ndicinga ukuba ayinandaba, bendisebenzisa le fowuni inyanga kwaye khange kundithathe iintsuku ezimbini ukuba ndiqhele ukusebenzisa inzwa ngaphambili hayi ngasemva njengakwitheminali zam zamva nje.
Eyona nto imbi ngokutshintsha kwemeko yile IHuawei P10 Plus ilahlekelwe yinto ethile eyahlula umenzi kwezinye iifowuni. Enye enye ifowuni kunye nomfundi ngaphambili kwaye ngaphandle kwempawu ezibonakalayo. Ewe, xa ujika ifowuni, izinto ziyatshintsha.
Kwaye kukuba umenzi uthathe ithuba lesithuba esishiywe ngumfundi ngasemva ukubandakanya uphawu lwentengiso kwindawo yayo, ngezantsi nje kwenkqubo yekhamera ephindwe kabini. Omnye umahluko kwimodeli edlulileyo kukuba imiphetho yeHuawei P10 Plus ngoku ijikeleze ngakumbi, isenza kube lula ukusibamba isixhobo.
Okokugqibela sine Iqhosha lokuvula kunye nokucima, ebekwe kwicala lasekunene lefowuni ecaleni kwamaqhosha olawulo lwevolumu. Ukutsho ukuba onke la maqhosha anikezela ngendlela engaphezulu kokuchanekileyo kunye nokumelana noxinzelelo, kodwa ngoku iqhosha lamandla linethoni epinki ejikeleze yona eyinika umahluko wokubamba endiwuthandileyo. Emazantsi siya kufumana ifayile ye- ukuphuma kwesithethi, kunye ne-USB Type-C yokutshaja izibuko kunye ne-headphone jack, Into eqhelekileyo kwizixhobo zebrendi.
Los Ukugqitywa kweHuawei P10 Plus kumangalisa nje. Esi sixhobo sine-aluminium chassis ejikeleze itheminali, kodwa ngaphezulu kwayo umva unesiphelo seceramic esinika iflegi entsha yeHuawei ukubamba okungafaniyo kwaye kulungile. Kule nto kufuneka kongezwe ifestile yeglasi ekhusela igumbi eliphindwe kabini kwaye ikhuphe umgangatho kuyo nayiphi na pores yayo.
El ifowuni ilungelelene kakhulu Kwaye kuvakala kulungile esandleni, ewe, kufuneka nditsho ukuba iHuawei P10 Plus yifowuni enkulu kakhulu. Kuninzi ukuba siyithelekisa nezinye iimodeli ezinezikrini ezifanayo okanye ezingaphezulu, njengeGPS S8 okanye i-LG G6.
Ngokwam, ndinezandla ezinkulu ukuze ndikwazi ukufikelela ngokulula nakweliphi na inqanaba kwiscreen, kodwa ndiqinisekile ukuba Abasebenzisi abaninzi kuya kufuneka basebenzise izandla zozibini xa bejonga kwizaziso okanye besenza izijekulo ezithile. Sisoloko sinokhetho lokuvula imowudi enesandla esinye, kodwa ndingathanda ukuba umphambili usetyenziswe ngcono nangona kuya kufuneka silinde isizukulwana esilandelayo ukubona ukuba iHuawei iyakwazi ukuqhubeka nokunciphisa ubungakanani beHuawei P10 Plus.
Iimpawu zobugcisa zeHuawei P10 Plus
Umzekelo P10 Plus
Inkqubo yokusebenza I-Android Nougat 7.0 phantsi komdibaniso wesiqhelo we-EMUI 5.1
Isikrini 5.5 "IPS NEO enesisombululo se-2K (2560 x 1440) kunye neCorning Gorilla Glass 5 Protection
Inkqubo I-Kirin 960 engundoqo ezisibhozo kwi-2.3 Ghz isantya sewotshi esiphezulu
i-ram Iimodeli ezine-4 GB yohlobo lwe-RAM LPDDR4 okanye nge-6 GB yohlobo lwe-RAM LPDDR4
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64/128 GB ngenkxaso yememori khadi
Conectividad Isizukulwane se-4 sokugqibela se-LTE 4 × 4 MIMO (ii-eriyali zomzimba ezi-4) ukuxhasa inethiwekhi ye-4.5G. I-2 × 2 i-Wi-Fi MIMO (ii-eriyali ezi-2) zokugubungela ngaphandle kwamacingo ngesantya esiphezulu- iBluetooth -I-GPS kunye ne-GPS-OTG-Uhlobo lwe-C yohlobo C
Ezinye izinto Isivamvo somnwe weminwe / ukumelana nokutshiza
Ibhetri I-3750 mAh ene-Huawei Super Charge itekhnoloji ye-smart
Ubukhulu 153.5 x 74.2 x 7.2 mm
Ixabiso I-699 euros yenguqulo ye-4 GB kunye ne-799 yemodeli ene-6 GB ye-RAM
IHuawei P10 Plus inezixhobo ezigqwesileyo kunezo zeHuawei Mate 9, ke ngoko bekulindeleke ukuba i-terminal ikhawuleze njengembumbulu, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo Imemori ye-6 GB ye-RAM Imodeli endiyihlalutyo enayo, kwaye ibiyile ndlela bendilindele ngayo.
El Kirin 960 Yiprosesa enamandla ye-octa-core eyenziwe nge-16 nanometer FinFET Plus yetekhnoloji kwaye inenkxaso kudidi lwe-LTE 12. Kulonto kufuneka songeze i-GPU yayo enamandla IMali G71 kunye ne-6 GB ye-RAM enesixhobo kwaye inikezela ukusebenza okumangalisayo.
Ndifuna ukugxininisa ukuba ndizamile ukwandisa amathuba efowuni ngokuvula uninzi lwezicelo kunye nemidlalo efuna izixhobo ezininzi ukuze zisebenze kakuhle kwaye Khange ndikwazi ukufikelela ngaphantsi kwe-2.5 GB ye-RAM ekhoyo.
Ngaba oku kuseta kufanelekile?Kude kube namhla, kubonakala ngathi kugqithisile ukunyusa i-6 GB ye-RAM kodwa ndiyaqonda ukuba imakethi ihlala ifuna ezona zinto zininzi, ke unokuqiniseka ukuba le fowuni iya kuba nakho ukuhambisa nawuphina umdlalo okanye usetyenziso kwixesha elizayo ngaphandle kweengxaki kwaye ngaphandle kokukhathazeka ngememori ekhoyo.
Gqamisa ukuba, Nangona iHuawei P10 Plus ingenakufakwa emanzini, inokuqaqamba kokuchasana ngokuba nomaleko okhuselayo kuwo onke amacandelo. Ukuba ungena eshaweni ngayo, inokujika ibe nephepha elinobunzima obunoyilo olugqwesileyo, kodwa akufuneki ukhathazeke ukuba kuya kufuneka ubize imvula okanye inyani yokuba ifowuni ihlupheka.
Umfundi onamandla weminwe onemimangaliso emikhulu
El IHuawei P10 Plus yeyona mfundi ubalaseleyo kwiminwe kwintengiso. Elula njengaleyo. Nanini na xa kuvavanywa isiphelo sendlela yeHuawei / iMbeko, ndiyathemba ukuba izakuma kweli candelo ngokubhekisele kwabo sikhuphisana nabo kwaye kwimeko yeHuawei P10 Plus umenzi uphinde wazigqwesa.
Ukukwazi kwabo ukuqaphela ukunyathela kwethu kwangoko kwaye kwaye izinga lempazamo alicacanga. Kuya kufuneka ndibeke umnwe ngokufanayo okanye kabini ngenyanga yokusetyenziswa. Kwaye ndiyathetha oku kuba ndiqinisekile ukuba kuyakwenzeka kum ngelinye ixesha, kodwa andikhumbuli nayiphi na imeko kucacile ukuba kweli cala inzwa yebhayometri isebenza ngokugqibeleleyo.
Ukongeza, iHuawei iphumeze ukhetho lokuba ikuvumela ukuba usebenzise umfundi ukuhamba ujongano lwesiphelo sendlela, endaweni yokusebenzisa amaqhosha akwisikrini. Ngothotho lwezimbo esinokubuyela kuzo, sibuyele kwiscreen esikhulu okanye uvule indlela yokwenza izinto ezininzi.
Ngokwam, khange ndikwazi ukuqhela kule nkqubo kwaye ndikhethe ukukhetha indlela yesiqhelo, enamaqhosha amathathu asezantsi kwesikrini, kodwa ndiyabazi abantu abaliqela abanefowuni kwaye bonwabile ngulo msebenzi ngoko ke andikwazi ukugxeka. Ukuba uyayithanda, yigcine, ukuba akunjalo, buyela kwindlela yesiNtu.
Isibonisi se-2K sokuthambisa amagxa ngeyona inkulu
Ngokungafaniyo ne-P10, entsha iHuawei P10 Plus inayo ipaneli ye-2K. Ndithetha ngesikrini se-IPS Neo esityikitywe ngumboniso waseJapan, obonwa kwezinye iimodeli zomenzi kwaye nesisombululo se-QHD (2560 x 1440 pixels) kwi-diagonal ye 5.5 intshi, eshiya uxinano lwamachaphaza angama-530 dpi.
Umgangatho wepaneli ulungile, ufikelela kwifayile ye- 500 nits ke awunakukhathazeka malunga nokusebenzisa i-terminal ngaphandle ngaphandle kokucinga ukuba ukukhanya kwelanga akuyi kukuvumela ukuba ubone iscreen.
Isikrini sijongeka silungile, sinemibala eqaqambileyo nebukhali. Nangona uPNdizithanda ngcono iipaneli ze-AMOLED ngcono, Ndimele ukuthi umsebenzi kule nkalo ulungile ngokwenene.
Kwakhona Ukujonga kwayo ii-angles kunye nezithethi ezinamandla ukuba iHuawei P10 Plus ikumeme ukuba ukonwabele imovie kunye nemidlalo yevidiyo nabahlobo kunye nosapho.
Kulungile, umbuzo wesigidi seedola. Kutheni ndifuna isikrini se-2K? Inyaniso kukuba ngeliso lenyama kunzima kakhulu ukwahlula ipaneli epheleleyo ye-HD kwi-2K enye, kodwa kukho iimeko ezithile apho i-WOW! Isiphumo sibonakala.
Kwelinye icala xa ufunda amaxwebhu okoko oonobumba bajongeka bubukhali, kodwa eyona nto ibalulekileyo kuxa isiza ukonwabele umxholo ngokwenyani. Kubalulekile ukuba nescreen solu hlobo ukuze ukwazi ukuxabisa kwaye usebenzise ngokuchanekileyo imidlalo, iimuvi okanye iividiyo ngokubanzi ngale teknoloji. Kwaye sele ndikuxelele ukuba umahluko ungaphezulu kokumangalisayo.
I-P10 Plus ine isithethi esikhulu, esisezantsi kwaye igcwalisa ngento yendlebe ngaphambili, ebonelela ngesandi esihambayo nesongezelelweyo.
Inyani yile yokuba uvakalelo olundishiyileyo luluhle kakhulu. Izithethi zivakala zilungile ngokwenene zinika isandi esicacileyo. De ube uvule ivolumu kakhulu, malunga ne-80-90% isandi esikrakra esenziwe enkonkxiweyo asiveli.
Ngale ndlela, ngaphandle kokufikelela kumgangatho wesandi seemodeli ezijolise kweli candelo njenge ZTE Axon 7, Ndingatsho ukuba umgangatho wesandi seHuawei P10 Plus yenye yezona zinto zibalaseleyo kwintengiso.
Ukuzimela ngokuchanekileyo, ukutshaja ngokukhawuleza okukhulu
IHuawei P10 Plus inetekhnoloji Intlawulelo enkulu esele siyibonile kwi-Mate 9 kwaye iziphumo ziyamangalisa.
Ukuqala I-3.750 mAh ibhetri Inamandla aneleyo okumelana nosuku lokusetyenziswa okunzulu ngaphandle kokukhathazeka ngefowuni ekushiya ulele phakathi emva kwemini. Ewe kunjalo, ukutshaja ifowuni rhoqo kwiintsuku ezimbini akunakwenzeka.
Eyona nto ndiyiphumezileyo kukolula ibhetri usuku olunesiqingatha ngokunika ukusetyenziswa okuphakathi. Qaphela ukuba ifowuni inendlela yokugcina amandla endisindise ngaphezulu kwengxaki enye. Ngaba unayo ibhetri engaphantsi kwama-20% eseleyo? Sebenzisa le ndlela kwaye ukhethe ezona zicelo zibalulekileyo ufuna ukusebenza nazo.
Kwaye ukuba koku songeza ukuba inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza ephakamisa iHuawei P10 Plus leyo ibhetri engama-50% kwimizuzu engama-30, sinomdibaniso onomdla ngokwenene. Ke isantya sincitshisiwe ngokubonakalayo, sithatha phantse iiyure ezimbini ukutshaja ngokupheleleyo i-terminal, kodwa ukutshaja ngaphezulu kwe-2% rhoqo kwimizuzu emi-3 yokutshaja, siyazi ukuba xa silibele ukutshaja umnxeba ebusuku, ngelixa sihlambayo sisitya isidlo sakusasa iya kuba nefowuni ekulungeleyo ukuyisebenzisa imini yonke.
I-EMUI 5.1 ithatha inyathelo eliya phambili ngokokusebenza
Uluhlu lwesiko analo iHuawei P10, yiyo isekwe = Android 7.0 Nougat, Into onokuyilindela kwisiphelo soluhlu. Utshintsho xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili ziyaphawuleka kuba, umzekelo, sinokuvula idrowa yesicelo, efanelekileyo ukuba awuyithandi inkqubo yedesktop yomaleko we-EMUI 5.1.
La Uninzi lweeapps kunye neempawu zicofwe kathathu kude Kulula kakhulu kwaye kulula ukufikelela kulo naliphi na icandelo lesiphelo. Gqabaza ulawulo lwayo lwemisebenzi emininzi, ukuba uchukumise nje kancinci kwiqhosha elihambelanayo siya kuthi sikwazi ukufikelela kwinkqubo "yamakhadi" esinokubona ukuba zeziphi izicelo esivulekileyo kuzo.
Njengeemodeli zangaphambili, iHuawei P10 Plus inokukhetha yenza izijekulo ezahlukeneyo ngamaqhina akho ukuthatha ii-skrini okanye ukwenza umsebenzi wescreen wokwahlulahlula oya kusivumela ukuba sisebenzise usetyenziso olunye ngaxeshanye kwiscreen esinye. Kuya kufuneka uyixhome, kwaye ndicinga ukuba kuyakuthatha ixesha ukuyenza, kodwa wakube uyiqhelile uya kubona ukuba isebenza kakuhle.
Gqamisa loo keyboard Swiftkey Kuza umgangatho kwisiphelo sendlela ukubhala ngale Huawei P10 Plus luvuyo lokwenene. Kwaye kugxininiswa ngokukodwa kwimowudi "yamawele", eyona nto inomdla kwi-EMUI 5.0 kwaye esivumela ukuba sisebenzise inkonzo efanayo, enje ngeWhatsApp okanye uFacebook, eneeprofayile ezimbini. Ilungele abo bantu banenombolo yobuqu nenombolo yobungcali kwaye abangafuni ukuphatha iifowuni ezimbini ngaxeshanye.
Ezi algorithms, ezingadingi kunxibelelwano lwe-intanethi ukusebenza, ukuziqhelanisa nokusetyenziswa kwethu kwemihla ngemihla kunye nokwenza usetyenziso olisebenzisa rhoqo libaleka ngokukhawuleza. Ngaba iyasebenza? Andinalwazi kakuhle Andikhange ndibone kuphucuka kwintsebenzo, kodwa kuba intsebenzo ilungile ngalo lonke ixesha, ndingacinga ukuba eli nqaku lixabiseke ngokwenene.
Enye yeekhamera ezintle kwimarike
I-Huawei iphinde yabheja kwi inkqubo lens ezimbini ethi icace gca injongo yomenzi ukomeleza ubudlelwane bayo kunye Leica. Kwaye iziphumo ezizuziweyo bezintle ngokwenene.
Kuqala ine-sensor yokuqala enesisombululo see-megapixels ezingama-20 kunye nendawo ekugxilwe kuyo f 2.2 eqokelela ulwazi lwe-monochrome (ngombala omnyama nomhlophe) kwaye okwesibini sifumana inzwa yesibini ye-12 ye-megapixel ene-focal aperture efanayo kunye ne-Capture imifanekiso ngombala .
Zombini iilensi ziyimodeli Leica Isishwankathelo - H 1: 2.2 / 27 esele siyibonile kwiHuawei P9 kunye neP9 Plus. Iziphumo zolu dibaniso zenza ukuba imifanekiso ifakwe ngombala okanye emnyama namhlophe ifikelele kwii-megapixels ezingama-20. Icebo lilele ekusetyenzisweni kwemifanekiso njengoko iHuawei P10 Plus ifaka phakathi zombini imifanekiso efakiweyo, ngombala nangombala omnyama nomhlophe, ukudibanisa imibala ngokudala umfanekiso we-megapixel eyi-20.
Kwaye kuthekani ngempembelelo bokeh Oku kufezekiswa ngekhamera ephindwe kabini yesiphelo kwaye yenziwe isebenze kwiparameter eyandisiweyo yokuvula kwifowuni yekhamera yeefowuni. Iifoto ezifakwe ngale ndlela ziyamangalisa kuba, yakuba nje ithathiwe, sinako ukwahlula ubunzulu bendawo yefoto enkosi kwisoftware yayo yokuqhubekeka, ukufezekisa iziphumo eziza kubonwabisa abathandi bokufota.
Kwaye isoftware inceda kakhulu kule nkalo. Inkqubo yekhamera yeHuawei P10 Kwaye inenani elikhulu lokucoca kunye neemowudi evula uluhlu olwahlukileyo lwamathuba. Ngokukodwa imo ye-monochrome yokuthatha iifoto ezimnyama kunye ezimhlophe ezimangalisayo. Kwaye asinakulibala imowudi yobuchwephesha eya kukuvumela ukuba utshintshe ngesandla iiparameter zekhamera ezahlukeneyo, ezinje ngokujolisa okanye ibhalansi emhlophe, esiba sisixhobo esifunekayo kwiingcali kwicandelo lokufota. Ewe qiniseka ukuba unako gcina imifanekiso kwifomathi yeRAW.
Ukutsho oko isantya esigxile kwikhamera P10 kunye kakhulu bKulungile, Ukubonelela ngokubamba ngokukhawuleza okukhulu kunye nomgangatho. Emva kwexesha ndiza kukushiya uthotho lweefoto ezithathwe kunye nefowuni ukuze ubone ukuba kunokwenzeka.
Imifanekiso efunyenwe nge-P10 Plus zinomtsalane kwaye inyani yokuba nakho ukudlala ngesiphumo se-bokeh inika inqaku elinomdla kakhulu. Ungayichazanga into yokuba sinokurekhoda kwifomathi ye-4K kwizakhelo ezingama-30 ngomzuzwana.
Igalari yeefoto ezithathwe ngeHuawei P10 Plus
El IHuawei P10 Plus yifowuni enkulu, ngehardware enamandla ngokwenene, ukugqitywa komgangatho kunye nenkqubo yekhamera emibini eya kuvuyisa abathandi bokufota. Umvelisi kudala wazimisa kwindawo yesithathu kubume behlabathi ngokubhekisele kwintengiso ye-smartphone, kodwa ukuba iyaqhubeka nokusebenza ngeli nqanaba andiqondi ukuba iyakuthatha ixesha elide ukungafumani iSamsung kunye neApple, abo bakhuphisana nayo. Okucacileyo kukuba namhlanje akukho namnye kwabo bakhuphisana naye oya kuba nakho ukusihlutha esi sikhundla kuye.
Kwaye ulumke, kuba IHuawei inentambo okwethutyana ukuze silindele uninzi lwezimanga, kwaye inomdla kakhulu, kulo nyaka. Yintoni eya kusothusa xa besazisa i-Huawei Mate 10 elandelayo?
Kukhulu ngokuthelekiswa nezinye iifowuni
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei P10 Plus, uhlalutyo kunye noluvo
Ezonaapps zilungileyo kulawulo lweefoto kwi-Android
Iinqwelo ezintlanu ezikumgangatho ophezulu nezithembekileyo zamaTshayina